လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းပြုလုပ်နည်း Martech Zone
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 25, 2020 ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 12, 2020 Ronen Shnidman
အီးမေးလ်စျေးကွက်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာသည့် အချိန်မှစ၍ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစသည့်နည်းအသစ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည့်တိုင်အီးမေးလ်သည်အဆိုအရထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည် စစ်တမ်း Smart Insights နှင့် GetResponse မှ ဦး ဆောင်သောစျေးကွက်ပေါင်း ၁၈၀၀ ကျော်ရှိသည်။
သို့သော်၊ ၎င်းသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုနည်းပညာအသစ်နှင့်မပြောင်းလဲနိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံမဟုတ်ဘဲတတိယပါတီစာရင်းများဝယ်ယူရုံသာမကသင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်စာရင်း၏အရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်အောင်နည်းလမ်းများယခုတွင်ရှိနေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်အခြေခံကျသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာများအထိသင်၏အီးမေးလ်၏ ဦး ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းအားလူမှုမီဒီယာများနှင့်ထိတွေ့ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏လူမှုမီဒီယာသူငယ်ချင်းများ၊ နောက်လိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုသင်၏အီးမေးလ်စာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းရန်အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကသိသာထင်ရှားနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ ဦး ဆောင်မှုကိုခြေရာခံနိုင်၊
သင်၏လူမှုမီဒီယာနောက်လိုက်များသည်များသောအားဖြင့်သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ အရောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် (သို့) သြဇာလွှမ်းမိုးရန်အခွင့်အာဏာမရှိသောကြောင့်သင်၏လူမှုမီဒီယာသူငယ်ချင်းများ၏တန်ဖိုးကိုမရေးပါနှင့်။ ငါ့အတှေ့အကွုံမြား၌လညျးမမှနျပါ။
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာမျက်နှာသို့ပို့ဆောင်သောလူမှုမီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ လူမှုရေးအသုံးပြုသူများကိုခေါင်းစဉ်စကားပြောဆိုမှုများနှင့်တန်ဖိုးထည့်သွင်းထားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ပုံမှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါကသင့်အား Twitter, Facebook နှင့် LinkedIn တို့မှတဆင့်မည်မျှအရည်အချင်းပြည့်မှီသောစာရင်းများကိုဝင်ရောက်နိုင်မည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသလိုအရေးကြီးတာက၊ အကယ်၍ ဒီလူတွေဟာမင်းကိုလူမှုရေးမီဒီယာတွေနဲ့ပုံမှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းရဲ့အီးမေးလ်တွေကိုဖွင့်ဖတ်ဖို့ပိုများပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိသတ်များနှင့်အတူ Hidden Lookalike ဦး ဆောင်မှုကိုရှာဖွေပါ
ဆိုရှယ်မီဒီယာဖြင့်သင်၏လက်ရှိအီးမေးလ်စာရင်းသည်ထိုသူများနှင့်သာသင့်ကိုမဆက်သွယ်ပါ။ ၎င်းသည်အလားတူသူများ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကြီးမားသောအလားအလာကောင်းများကိုဖွင့်ပေးသည် စိတ်တိုင်းကျပရိသတ်ကိုအင်္ဂါရပ်.
ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ပြုလုပ်ရန်မှာသင်၏အီးမေးလ်စာရင်းကိုစာရင်းဇယားမှပို့ခြင်း၊ ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင့်စိတ်ကြိုက်ပရိသတ်ကိုသက်တမ်းနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများကဲ့သို့သောအရည်အချင်းပြည့်မီသောအရည်အချင်းများဖြင့်ကျဉ်းပြီး Facebook ကိုရှာရန်ပြောပါ lookalike ပရိသတ်ကို.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်သင်၏လက်ရှိအီးမေးလ်စာရင်းရှိသူများနှင့်ဆင်တူသောလက္ခဏာများရှိသူများကိုရှာဖွေရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာဘေ့စ်ကိုသုံးလိမ့်မည်။ သင်၏ပုံပန်းသဏ္ikeာန်တူသောပရိသတ်များကို နှိပ်၍ ရှေ့စာမျက်နှာတွင်ကဲ့သို့သင်၏ဆိုက်ရှိဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာသို့ ဦး တည်သွားအောင်ဆွဲဆောင်သောပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာတစ်ခုဖန်တီးပါ။
အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာရန် Social Media ကိုသုံးပါ
data appending လို့ခေါ်တဲ့လွယ်ကူပေမယ့်နည်းနည်းလေးပိုအဆင့်မြင့်တဲ့နည်းကိုသုံးပြီး ဦး ဆောင်မှုတွေရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာရန်လူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်များကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်ဖြည့်စွက်ထားသောအချက်အလက်သည်သင်၏ ဦး ဆောင်ဆက်သွယ်သူအချက်အလက်အတွက်ကွက်လပ်များကိုဖြည့်ရန်တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဤနေရာတွင်အထူးပြုသောကုမ္ပဏီအချို့တွင် Sellhack, Clearbit နှင့် Pipl (ငါအလုပ်လုပ်သည့်နေရာ) တို့ပါဝင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Pipl's Search တွင်အသုံးပြုသူများသည် ဦး ဆောင်သူများ၏အမည်များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာလက်ကိုင်များစာရင်းကို upload ပြုလုပ်၍ ၎င်းအီးမေးလ်ပျောက်ဆုံးနေသောအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည် အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာပါ လူမှုရေးနားထောင်ခြင်းမှတဆင့်တွေ့ရှိအလားအလာဆောင်ဘို့။ spammer ဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဤလူများနှင့်ဆက်သွယ်သောအခါရှင်းလင်းသော opt-out option ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ကံဆိုးသောအချက်မှာလူအများစုကသင်၏အီးမေးလ်စာရင်းအတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာအတုများကိုအသုံးပြုရန်စာရင်းသွင်းလိမ့်မည်။ ဤလိပ်စာများကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းသည်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရုံသာမကဘဲအီးမေးလ်များလွန်းခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားသင့်အား spambot အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် သင့်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပါ.
စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အီးမေးလ်အတည်ပြုဝန်ဆောင်မှုများ အပါအ ၀ င်အီးမေးလ်အတုများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရန် ဘယ်တော့မှမ, ကောင်းပါတယ်, Bulk အီးမေးလ် Validator, အီးမေးလ် Validator နှင့် Experian ဒေတာအရည်အသွေး.
များသောအားဖြင့်လူများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအီးမေးလ်အကောင့်များသို့မဟုတ် Gmail နှင့် Yahoo ကဲ့သို့သောပံ့ပိုးသူများထံမှအဆက်အသွယ်ပုံစံကိုဖြည့်သောသူတို့သည်မကြာခဏစစ်ဆေးသောလိပ်စာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤအချက်သည်အမှန်တကယ်တွင်ဤသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီစေခြင်းများကိုများစွာခက်ခဲစေသည်။
ကံကောင်းတာက, တူသောဝန်ဆောင်မှုများကို လတ်ဆတ်သောလိပ်စာ နှင့် Tower ဒေတာများ ၀ န်ဆောင်မှုရမှတ်အပေါ် အခြေခံ၍ သင်တုန့်ပြန်ရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ဖောက်သည်များ၏နှစ်သက်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်အီးမေးလ်များကိုသင်ရှာဖွေလိမ့်မည်
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်သင်သည်လူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်များနှင့်အတိတ်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသုံးနိုင်သည် Pipl's People Data API အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အလုပ်လုပ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာဖွေရန်။ အချိန်ကုန်ခံပြီးအီးမေးလ်မှတ်တမ်းများရှိသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကသင့်အား ဦး ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ပေးမည့်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုနေခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်နေရာနှင့်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးသင့်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသုံးမျိုးသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစျေးနှုန်း၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းနှင့် ၄ င်းတို့၏နည်းပညာသည်သင်၏ ဦး ဆောင်စာရင်းပလက်ဖောင်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အဓိကထုတ်ယူမှုမှာသင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းနှင့်သူတို့၏စကားပြောနှုန်းများတိုးတက်စေရန်နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုရသင့်သည်။ ၂၀၁၅ Smart Insights စစ်တမ်း၏နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာစျေးကွက်သမားအများစု၏ (၅၃%) သည်၎င်းတို့၏ ဦး ဆောင်ဆက်သွယ်မှု၏အတိုင်းအတာနှင့်ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ခဲသတ္တုနှင့်စာရင်းပြုစုရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အများကြီးနည်းပါးလာသောစျေးကွက်သမားများ (၂၅% အောက်) သည်အရည်အသွေးကောင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်လူမှုရေးသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်ပေးပါ။ အပိုခြေလှမ်းကိုလှမ်းခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
Tags: ကောင်းပါတယ်အမြောက်အများအီးမေးလ်အတည်ပြုအီးမေးလ်အကောင့်များအီးမေးလ်အတည်ပြုသူအီးမေးလ်အတည်ပြုအတွေ့အကြုံဒေတာအရည်အသွေးကိုလိပ်စာအသစ်ရေတံခွန်pipl ဒေတာ apiလူမှုမီဒီယာမျှော်စင်ဒေတာ
Ronen မှာထုတ်ကုန်evဝံဂေလိဆရာဖြစ်ပါတယ် ပလွေလူများ၏လူမှုရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည့်ကုမ္ပဏီ။ သငျသညျသူ့ကိုနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလိုက်နာနိုင်ပါသည် တွစ်တာပေါ်တွင် Pipl.
ဧပြီ 28, 2017 မှာ 6: 53 AM
ဟေး Email Marketing နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အီးမေးလ်နောက်ဆက်တွဲဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း သင်၏အခြားဘလော့ဂ်များကို တွေ့ရသည့်အတွက် ဝမ်းသာပါသည်။